Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » 13.3 milyan oo yurub ah oo yimi si ay u wadaan soo kabashada dalxiiska Khaliijka
Airlines • Airport • Aviation • Wararka Baxrayn • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Kuweyt Kuweyt • Wararka Raaxada • News • Wararka Cumaan • Dadka • Wararka Qadar • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Sacuudi Carabiya Warka • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Imaaraadka Carabta
13.3 milyan oo yurub ah oo yimi si ay u wadaan dib u soo kabashada dalxiiska Khaliijka.
Dalalka ku jira GCC waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta, Sacuudi Carabiya, Qadar, Cumaan, Kuweyt iyo Baxrayn waxayna dhammaantood bixiyaan xulashooyin badan oo duulimaadyo ah iyo badeecad dalxiis oo kala duwan, taas oo soo jiidanaysa socotada reer Yurub.
Socotada reer Yurub waxay noqon doonaan darawal muhiim u ah ka soo kabashada dalxiiska ee gobollada GCC ee COVID-19.
Sannadkii 2019-kii ka-hor-tagga faafa ee Yurub ilaa waddamada GCC waxay gaareen 11.8 milyan oo dalxiisayaal ah.
Dadka imanaya masiibada ka dib ayaa la saadaalinayaa inay ku soo kaban doonaan 13.3 milyan oo dalxiisayaal ah marka la gaaro 2024-ka, oo ah isku-darka kobaca sanadlaha ah (CAGR) oo ah 17.5%.
Dadka socotada ah ee reer Yurub ayaa lagu wadaa inay u noqdaan suuq il muhiim ah gobolka Khaliijka, gaar ahaan Golaha Iskaashiga Khaliijka (GCC) dalal, kuwaas oo ka caawin doona dib -u -soo -kabashada warshadaha dalxiiska masiibada. Wadamada ku jira GCC waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta, Saudi Arabia, Qadar, Cumaan, Kuwayt iyo Baxrayn waxayna dhammaantood bixiyaan xulashooyin badan oo duulimaadyo ah iyo badeecad dalxiis oo kala duwan, taas oo soo jiidanaysa socotada reer Yurub.
Xogtii ugu dambeysay ee warshadaha ayaa muujineysa in sannadka 2019 imaanshaha ka hor masiibada Yurub ka timid waddamada GCC ay gaareen 11.8 milyan oo dalxiisayaal ah. Sanadkii 2020, dadka yimid ayaa ku burburay 3.9 milyan masiibada darteed, 67% sanad ka badan (YOY) ayaa hoos u dhacday, si kastaba ha ahaatee, imaatinka masiibada kadib waxaa la saadaalinayaa inay ka soo kaban doonaan 13.3 milyan oo dalxiisayaal ah marka la gaaro 2024 ) oo ah 17.5%.
Marka la eego koritaanka sare ee laga filayo dadka socotada ah ee reer Yurub ee imanaya GCC waddamada saddexda sano ee soo socota, waxay noqon doonaan darawal muhiim u ah ka soo kabashada dalxiiska gobollada COVID-19. Hal dal oo ahmiyad gaar ah u leh gobolka waa UK maadaama saadaashii ugu dambeysay ee warshadaha ay muujinayaan in imaanshaha UK ee wadamada GCC ay gaari doonaan 3 milyan marka la gaaro 2024 CAGR oo ah 21.7%.
UK socotada ayaa had iyo jeer soo jiitay GCC dalalku markay bixiyaan dalab dalxiis oo kala duwan xagaaga iyo qorraxda jiilaalka, oo leh xeebo aad u qurux badan, magaalooyin fidsan iyo hawlo xiiso leh. Hufnaanta iyo heerka Dubai oo leh hudheelo raaxo leh iyo waaya -aragnimo qaali ah oo ay leedahay inay bixiso ayaa sidoo kale caan ku ah socdaalayaasha UK.
Wadamada ku jira GCC waxay leeyihiin wax badan oo ay ku soo jiidan karaan dadka reer Yurub, oo ay ku jiraan waxqabadyo isku dhafan laga bilaabo fasaxa xeebta dhaqameedka ilaa khibrada dhaqameed ee ay bixiyaan caadooyinka iyo taariikhda gobolku. Tani waxay ka caawin doontaa inay dib u soo ceshato sumcadeedii si ka dhakhso badan meelaha loo dalxiis tago oo kaliya oo bixiya khibrad nasasho magaalada.